Zonke Izinto Nge-Trenbolone Inanthate Powder | AASraw
ezaposwa ngomhla 06 / 20 / 2022 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Ezi zimbini i-steroids ziphantse zifane, kodwa umahluko uza ngamandla kunye nesantya sokwenza. Ukutsalwa kunye nenqanaba lokukhutshelwa kweTren A likhawuleza ngakumbi kunogxa walo, yiyo loo nto i-trenbolone acetate yobomi obufutshane. Ngesi sizathu, umzimba wakho uya kubhalisa iziphumo ezintle ze-trenbolone enanthate kwinqanaba lamaqhina.
Le trenbolone enanthate ine-half-life between 8 to 12 days. Ukuba yi-ester ende, i-Trenbolone Enanthate isebenza ngokuthe ngcembe emzimbeni ngenqanaba lokucotha kancinci. Ke ngoko, ihlala kwinkqubo yomntu kangangeentsuku ezimbalwa ngaphambi kokukhutshwa.
Xa usenza uvavanyo lwe-steroid, i-Trenbolone Enanthate iya kubonakala kwiinyanga ezintlanu emva kokuba uphumile kumjikelo we-tren. Isizathu kukuba imetabolism yayo yenzeka ngesantya senkumba. Ngaphandle koko, inyani yokuba eli qela libonisa i-ester ende kwaye inesitofu inegalelo kulibaziseko lokuhamba kwegazi.
Ukudityaniswa kweeproteni kuhlala kulingana nobukhulu bezihlunu emzimbeni. Ukuphakama komgangatho wayo, kokukhona izihlunu ziya kuba ninzi. Ngaphezu koko, iiproteni zikhusela izicubu esele zikho kwaye zikhawulezisa iinkqubo zokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Kakhulu, ii-anabolic steroids zomlomo zixhalabisa i-hepatoxicity. Ukuba sisiyobisi esitofwayo, i-Trenbolone iyakuphepha ukudlula kwisibindi ngexesha le-pharmacokinetics yayo. Ukuba kunokwenzeka ukuba ube nemicimbi yesibindi ngelixa usemgceni, kufuneka usole istaki se-steroid obusisebenzisa.
Ukuba uxakeka ngaphakathi komjikelo we-Tren E, ndincoma i-Primobolan, i-Masteron ne-Halotestin. Winstrol, i-testosterone enanthate powder, kunye no-Anavar babamba kakuhle nge-tren kumjikelo wokukhwaza.
Ngokukhawuleza emva kokuba ugqibe umjikelo we-Trenbolone enanthate, qiniseka ukuthatha i-50mg yeClomid ngosuku. Kuya kufuneka uqhubeke nedosi kwiintsuku ezingama-21 ezizayo. Kwangelo xesha, qinisekisa ukulawula i-20 - 40mg yeNolvadex kangangeentsuku ezilishumi.
I-Trenbolone enanthate iyafumaneka kwiifom ezinokujova. I-avareji ye-Trenbolone enanthate dosage ilele phakathi kwe-75mg ukuya kwi-100mg, ekufuneka uyithathe kabini ngeveki ngenaliti okanye ngenaliti yemithambo yenaliti. Olu lingano luthetha ukuba i-dosing yeveki nganye iwela kuluhlu lwe-150mg ukuya kwi-200mg.
Eli chiza linamandla kubaqalayo kunye nabasebenzisi be-steroid abaphakathi. Ukuba kathathu i-anabolic kune testosterone, iTrenbolone ilungele abakhi bomzimba abanzima. Ukuba uqala, kuya kufuneka ujonge ukujongana nezinto ezizodwa Aasraw i-trenbolone i-acetate powder.
Nangona i-Tren E ingekho semthethweni e-US, e-UK, e-Australia nase-Canada, uninzi lwamazwe aku-Mbindi Mpuma nase-Afrika khange alunike uxanduva lokulawula ukusetyenziswa kwawo. ECanada, sisiyobisi seShedyuli IV phantsi koMthetho olawula iziyobisi. Ungalisebenzisa eli thuba kwaye ujonge i-trenbolone acetate powder yabathengisi njenge-www.aasraw.com.
Qiniseka ukuba uthelekisa amaxabiso e-Trenbolone enanthate phakathi kwabathengisi abohlukeneyo, jonga ubungakanani bomthengisi, kunye nokuhanjiswa kwezinto. Ngaphandle koko, iwebhusayithi kufuneka inike isiqwenga solwazi olubanzi malunga neTren E. Olu lwazi lubandakanya izibonelelo, iziphumo ebezingalindelekanga ze-trenbolone, idosi, kunye nendlela yokulawula iziphumo ebezingalindelekanga.
Ngaba uyazibuza ukuba kutheni i-Trenbolone E powder isichitha njenge "anabolic" enobunzima? Ewe kungenxa yokuba ikhompawundi ine-half-life eyandisiweyo kwaye ingahlala kwinkqubo ixesha elide ngaphambi kokupheliswa. Nokuba kuvela imicimbi emibi, umsebenzisi uya kuyishiya idosi, kodwa iziphumo ziya kuhlala zikho kwiiveki ezimbini ezizayo.
Yonke into omele uyazi ngeTadalafil	Indlela yokukhetha ii-Steroids Powder Suppliers kumanyathelo ali-12